Qorshaha Farmaajo ee Shirka Afisyooni | KEYDMEDIA ONLINE
Waa shirkii 6aad oo Farmaajo ku baaqayo tan iyo December 2020, kuwaasoo dhamaantooda fashilmay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Farmaajo ayaa lasoo baxay mudooyinkii dambe dhaqan ah "ismuuji inaad Madaxweynaha tahay", oo marwalba ka shaqeeya fashilinta isku-day kasta oo Beesha Caalamka iyo Madaxda Puntland iyo Jubbaland sameeyaan, si ay isaga uga dhigaan Madaxweyne waqtigiisu dhamaaday oo aan wax xasnaad lahayn.
Farmaajo wuxuu Habeenkii Khamiista ku dhawaaqay inuu shir isagu yaarey Madaxda Maamullada shanta ah, iyadoo midkii bishii lasoo dhaafay sida oo kale u iclaamiyay fashil ku dhamaaday, kadib markii Deni iyo Axmed Madoobe qaadaceen.
Qorshaha Farmaajo ayaa ah inuu shirkana fashilmo, maxaa yeelay asal ahaanba isaga dhab kama ahayn wadahadal, balse wuxuu isaga leexinayay indhaha Gollaha Amaanka ee QM oo ku Arbacadii ku baaqay in shir deg deg ah Madaxda Soomaaliya isaga yimaadaa khilaafkana xaliyaan, si doorasho loo dhan yahay dalka uga dhacdo.
Ujeedka iyo danta uu ka leeyahay Farmaajo ayaa ah inaan la dhihin wadahadal ma ogola, una muujiyo inuu isagu yahay marwalba midka Shir isagu yeera, oo dhinacyada kalena diidaan.
Shirka Maanta furmaya Farmaajo wuxuu sheegay inuu isaga isagu yeeray, halka Puntland ay shaacisay in qaban-qaabada Beesha Caalamka leedahay, waxayna labada dhinac isku khilaafeen ajendooyinka oo Villa Somalia leeyahay waxaa looga hadlayaa heshiiskii Sep 17, halka Maamulka Deni leeyahay waa is arag lagu eegayo ajendaha shirka soo socda.
Farmaajo inay shirarka lagu kala tago waxay u sahlaysaa inuu mudo-kordhin sameysto, waana qorshihiisa labaad [Plan B], iyadoo fulinteeda uu diyaar u yahay Mursal, oo Mooshin geyn doono Gollaha Shacabka, kadibna Xildhibaanno taabacsan Villa Somalia ansixin doonaan.
Isku aragti iyo isku ajende lagama ahan Shirka Afisyooni, wali Shuruudihii Axmed Madoobe iyo Deni halkoodii ayay yaallaan, Farmaajo isna diyaar uma ahan inuu aqbalo dalabka labada hogaamiye ee laf-dhuun-gashay ku noqday maamulkiisa afartii sano ee lasoo dhaafay.